Meg Mallon: Fame ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားရဲ့ဇီဝ၏ခန်းမဗိုလ်မှူးနိုင်ပွဲများ
Meg Mallon မျိုးစုံအဓိကချန်ပီယံအနိုင်ရတဲ့, 1990 မှတစ်ဆင့်နှင့် 21 ရာစု၏အစောပိုင်းနှစ်ထဲသို့ LPGA Tour အပေါ်တစ်ဦးကထိပ်တန်းကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အစောပိုင်း Solheim ဖလားများစွာကိုကစားနောက်ပိုင်းတွင်အသင်းကပ္ပတိန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နှင့်အညီ, နောက်ဆုံးမှာသူမဟာ Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးခန်းမသို့မဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မွေး date: ဧပြီလ 14, 1963
မွေးရာဌာန: Natick, Mass ။
ခရီးစဉ်၏နံပါတ် Meg Mallon အားဖြင့်ဆွတ်ခူး
LPGA Tour: 18 (အားလုံးကိုအနိုင်ပေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော)
Mallon အားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့လေးပါးဗိုလ်ကြီး 1991 LPGA ချန်ပီယံရှစ်နှင့် 1991 ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ကြ၏ 2000 အတွက် du Maurier ဂန္ထဝင်; နှင့် 2004 ခုနှစ်နောက်တဖန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ။
အဖွဲ့ဝင်အမေရိကန် Solheim ဖလားအဖွဲ့သည် 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005
ဗိုလ်ကြီးအမေရိကန် Solheim ဖလားအဖွဲ့သည် 2013 ခုနှစ်,
အဖွဲ့ဝင်, Fame ၏မီချီဂန်ဂေါက်သီးခန်းမ
Meg Mallon ၏ဂေါက်သီးအတ္ထုပ္ပတ္တိ
Meg Mallon အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် State University မှကောလိပ်ကျောင်းဂေါက်သီးကစားနှင့်သူမသည် 1986 ခုနှစ်လိုလားသူလှည့်, ဒါပေမယ့် LPGA Tour သမိုင်းမှတ်တမ်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားအများစုနဲ့မတူဘဲ, Mallon တစ်လိုလားသူအဖြစ်ထူထောင်ရရုန်းကန် 1983 အတွက်မီချီဂန်အပျော်တမ်းချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Mallon ပထမဦးဆုံးကစား LPGA ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီပြိုင်ပွဲ (Q-ကျောင်း) သူမသည်သူမ၏ခရီးစဉ်ကဒ်ဝင်ငွေမပြုခဲ့ 1986 ခုနှစ်, ဒါပေမယ့်သူမ Non-ကင်းလွတ်ခွင့်အဆင့်အတန်းကိုတောင်းဆိုဖို့လုံလောက်တဲ့မြင့်မားသော finish ကိုပြုလေ၏။ သူမအသက် 18 ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားခဲ့ပေမယ့်မှသာငါးဖြတ်တောက်မှုကိုဖန်ဆင်းသည့်အခါခရီးစဉ်အပေါ်သူမ၏လူသစ်နှစ် 1987 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာပြန်မေး-ကျောင်းဖို့ပဲ, တဖန်သူမ Non-ကင်းလွတ်ခွင့်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူကွယ်ပျောက်လာ၏။
1988 ခုနှစ်တွင်သူမ 20 ဖြတ်တောက်မှု၏ 17 လုပ်မထိပ်တန်း 10 ဦးချောရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် 1989 ခုနှစ် လာ. , သူမနောက်ထပ်တစ်နှစ်သူမ၏ကစားခွင့်ထူးကိုစောင့်ရှောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲ 1989 Mallon ရဲ့ပထမဆုံးထိပ်တန်း 10 finish ကိုတစ်လှည့်လည်ကဒ်ရဖို့ပဲငွေအလုံအလောက်ရရှိခဲ့သည်။
1990 ခုနှစ်, Mallon ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်ငါးထိပ်တန်း 10s နှင့်ချော 27 ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် 1991 ခုနှစ်, သူမနောက်ဆုံးတော့သူမ၏ breakout စွမ်းဆောင်ရည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ: အဲဒီနှစ်, Mallon သူတို့တွင်နှစ်ခုဗိုလ်ကြီးလေးကိုအနိုင်ပေး posted LPGA ချန်ပီယံရှစ် နှင့် အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ။ သူမသည်မှပြေးသမား-up, ကိုလက်စသတ် Pat Bradley ပိုက်ဆံစာရင်းတွင် Bradley မှတစ်နှစ်တာပြိုင်ပွဲများ၏ Player ကိုနှင့်ဒုတိယ။
Mallon 1993 နှင့် 2000 ခုနှစ်နှစ်ကြိမ်အနိုင်ရသော breakout တစ်နှစ်အကြာတွင်အများအပြားရာသီအတွက် LPGA အပေါ်ထိပ်ကစားသမားအကြားခဲ့ပါတယ်နှင့် 2004 ခုနှစ်သုံးကြိမ်သူမသည်အခြားအဓိက, ကအဆိုပါအနိုင်ရ du Maurier 2004 ခုနှစ် 2000 ခုနှစ်, နှင့်သူမ၏ဒုတိယမြောက်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ။
ကြောင်းပြိုင်ပွဲရဲ့သမိုင်းထဲမှာနိမ့်ဆုံးနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည် - ထိုမိန်းမတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း-ပတ်ပတ်လည် 65 ပစ်ခတ်, စတိုင်ဒုတိယပွင့်လင်းသောအအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Mallon 2004 ခုနှစ်တွင်သုံးကြိမ်အနိုင်ရနှင့်သူတို့အားသူမ၏နောက်ဆုံး LPGA ကိုအနိုင်ပေးခဲ့သညျ။
ဗိုလ်ကြီးအတွက်သူမ၏လေးကိုအနိုင်ပေးအပြင်, Mallon ပြေးသမား-Up အဖြစ်လေးကတခြားကြိမ်ပြီးဆုံး။ သူတို့အားဒုတိယအရပ်ကိုပြတစ်ခုမှာ Mallon သူမ၏အကြီးမားဆုံးစိတ်ပျက်အဖြစ်ရေတွက်သော 1995 အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open မှာခဲ့ - သူမနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ငါးလေဖြတ်ခဲမှုတ်ခြင်းနှင့် Annika Sorenstam သူမ၏ပထမဦးဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း LPGA Tour အောင်ပွဲထိုသို့အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံး Mallon ထဲမှာပုံမှန်ပါဝင်သူခဲ့ Solheim ဖလား ရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်ရှစ်ကြိမ်ကစားခြင်း။ သူမ၏နောက်ဆုံးအသွင်အပြင်၏ထိုအချိန်တွင် Mallon Solheim ဖလားကစားအတွက်ပွဲစဉ်များနှင့်ရမှတ်အဘို့အရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မှတ်တမ်းများ (သူမ၏အမှတ်အသားများအကြာတွင်ကျော်လွှားခဲ့ကြပေမယ့်) ၏များစွာသောကျင်းပခဲ့တယ်။
2013 ခုနှစ်တွင် Mallon သူမကအမေရိကန် Solheim ဖလားအသင်းကပ္ပတိန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါကြိုးကို ပေး. , ဒါပေမယ့်သူမ၏ကစားသမားရေးအဖွဲ့ဥရောပကရှုံးနိမ့်ခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။
သူမသည် Legends Tour, အမျိုးသမီးဂေါက်သီး၏အကြီးတန်းခရီးစဉ်အပေါ်ရံဖန်ရံခါကစားပေမယ့် Mallon, 2010 မှာ LPGA ကစားရာမှသူမ၏အငြိမ်းစားကြေညာခဲ့သည်။ သူမသည် 2017 ၏အတန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးခန်းမမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝက: ဗက်ဒံယလေသနှင့်အတူ Mallon ရဲ့ဆက်ဆံရေး
2017 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ခန်းမ Fame ၏ induction မိန့်ခွန်းစဉ်အတွင်း Mallon ကြောင်းသူချင်းခန်းမ-of ရေနစ်မြုပ်လူသိရှင်ကြားပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဖော်ပြထား ဗက်ဒံယလေက သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ, အစဉ်အဆက်နှစ်ခုခန်းမ-of ရေနစ်မြုပ်ပါဝင်သည်ဟုတစ်ခုတည်းသောဂေါက်သီးစုံတွဲမှ, သူတို့ကိုစေသည်။
သူချင်းကစားသမားအကြားပွင့်လင်းလျှို့ဝှက်ခဲ့ပေမယ့်အရင်ကလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေကစားသမားများကအသိအမှတ်ပြုမပေးရာ - - ကြောင်းမိန့်ခွန်းစဉ်အတွင်း "ကျနော်တို့ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းအတူတကွ 25 နှစ်ကျင်းပနေပါတယ်" ဟု Mallon ဒံယလေသနှင့်အတူသူမ၏ဆက်ဆံရေးကဆိုသည်။
Meg Mallon အကြောင်းအသေးအဖွဲ
Mallon ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် 60 တစ်ရမှတ် post မှပထမဦးဆုံး LPGA ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ 2003 Welch ရဲ့ / Fry ရဲ့ချန်ပီယံရှစ်၏ဒုတိယပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသို့သော် Tour သမိုင်းမှတ်တမ်းအတွက်အနိမ့်လှည့်လည်မဟုတ်ခဲ့, နှစ်နှစ်အစောပိုင်းက, Annika Sorenstam တစ်ဦး 59 သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
Mallon 13-တစ်နှစ်ကွာဟမှုအဖြစ်အပျက်ရဲ့သမိုင်းအတွက်အနိုင်ပေးအကြားအရှည်ကြာဆုံးကာလသည် 1991 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open အနိုင်ရခြင်းနှင့် 2004 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ဒုတိယ။
Mallon ရှစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသော တွင်း-In-One ခရီးစဉ်သမိုင်း၌ဒုတိယမြောက်အများဆုံးအဘို့အချည်ထား, LPGA ပြိုင်ပွဲကစားနေစဉ်အတွင်း။ ( ကေသီ Whitworth 11. အတူ All-အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်)
"ဒါဟာကောင်းစွာ-ကြိုက်တယ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်နှင့်လေးစားခံရဖို့တောင်ပိုကောင်းတယ်။ " - နှစ်ဦးစလုံးသူ Mallon, 1990 ခုနှစ်တွင် LPGA ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကစားသမားအမည်ရှိခံရပြီးနောက်ကိုးကား။
Meg Mallon ရဲ့ခရီးစဉ်အောငျမွငျမှုမြား
Mallon အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ် 18 ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နိုင်ရန်အတွက်စာရင်းရှိသူများ 18 ကိုအနိုင်ပေးဖြစ်ကြ၏:
1991 LPGA ချန်ပီယံရှစ်
1991 ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open
1991 Daikyo ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံရှစ်
1993 Ping / Welch ရဲ့ချန်ပီယံရှစ်
1993 ခုနှစ်က Sara Lee ကဂန္ထဝင်
1996 ဖလားခေါကျဆှဲဟာဝယေံ Ladies ပွင့်လင်း
1996 က Sara Lee ကဂန္ထဝင်
1998 စတားဘဏ် LPGA Classic
1999 Naples LPGA သတိရအောက်မေ့
1999 က Sara Lee ကဂန္ထဝင်
2000 Wegmans Rochester အင်တာနေရှင်နယ်
2002 ဘဏ် Montreal ၏ကနေဒါအမျိုးသမီးပွင့်လင်း
2003 ADT ချန်ပီယံရှစ်
2004 အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open
2004 BMO Financial Group ကနေဒါအမျိုးသမီးပွင့်လင်း
2004 ဂျေမီတတ်ကြ၏ Owen Corning Classic
2009 ခုနှစ်အကောင်းဆုံး R & B / Soul သီချင်းများ
တစ်ဦးက မှစ. Z ကိုမှသတ္တုသတ္တုစပ်များစာရင်း
ပြည်နယ်ယူနစ်လေ့လာမှု - ဝါရှင်တန်
'' Prendre '(ယူပါရန်): ခြံဝင်း conjugation
အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့, အဆက်မပြတ်ဆုတောင်းပါနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Give
အဆိုပါ Element တွေကို၏အရောင်ကို period table - အနုမြူစည်းဝေး
4 အရာကမျြးစာကိုစိုးရိမ်နေကြအကြောင်း Says
မဂိုအိန္ဒိယ Aurangzeb ၏ဧကရာဇ်
ထိပ်တန်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းများသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအဘို့အလို SAT ရမှတ်များ